Archives eve - SmartMe
Archives tag: a
Dom » Entina nomenao ny "eve"
Eve Energy - Famerenana ny Sockets Smart avy amin'ny HomeKit
Eva, eve angovo
Sa mety ho famerenana Smart Outlet indray? Amin'ity indray mitoraka ity izahay dia hampiseho aminao ny Eve Energy! Fivoahana HomeKit hafa!
Eve Extend - ampitomboy ny isan-karazany ny fitaovana Bluetooth avy any Eve
Bluetooth, Eva, hariva manitatra
Ny iray amin'ireo fitaovana niomanako nandritra ny fotoana ela dia ny Eve Extend. Tahaka ny itiavako ny fitaovana Eva, dia nanana olana kely tamin'ity vokatra ity aho. Ahoana no fomba fiasa sy ny fomba fiasa? Fotoana ho an'ny sasany ...
Eve Cam - fakantsary iray mijery amin'ny alàlan'ny HomeKit
Apple HomeKit, Eva, cam eve, homekit, video tsara homeko, fakan-tsary homekit
Manana an'i Cam Cam ao an-tranoko efa ela aho. Ity dia HomeKit hafa na koa fakantsary HomeKit Secure Video izay tonga tao an-tranoko. Ahoana ny fomba fiasa aorian'ireo herinandro vitsivitsy niasana? Na ...
Eve Energy - inona no ilainao socket marani-tsaina?
Eva, eve angovo, faladiany, homekit, outlet mahay
Ilay mpamokatra vahaolana alemanina, EVE, dia manolotra karazana fitaovana Apple HomeKit isan-karazany. Ka raha manana iPhone ianao ary maniry ny hanangana ny tranonao Smart - dia eo amin'ny toerana mety ianao! Taorian'ny fitsapana ny sensor eve ...
Eve Motion Sensor - Review ao amin'ny HomeKit Motion Sensor
sensor sensor, Eva, eve sensor
Ahoana ny famerenana ny sensor momba ny fihetsiketsehana miasa amin'ny WiFi ary mifandray amin'ny HomeKit? Manasa anao aho!
Eve Door & Window - fitsapana ny varavarana sy ny varavarankely fanidiana ho an'ny mpankafy Apple
8 Martsa 2021
Apple HomeKit, Eva, varavarana sy varavarankely, homekit
Ny marika Alemanina Eva dia miara-miasa akaiky amin'ny Apple HomeKit. Ka raha mpampiasa fitaovana miaraka amin'ny "paoma" ianao ary maniry hanangana trano marani-tsaina dia tonga amin'ny toerana mety ianao! Ny sensor Eva Door & Window dia naseho androany, na eo aza ny vahaolana tsy mahazatra ...
Eve Water Guard - Hevitra momba ny tondra-drano avy amin'i Eve
paoma, Apple HomeKit, sensor sensor, Eva, mpiambina rano alina, homekit
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe inona no hatao rehefa manomboka mivoaka ny milina fanasan-damba na ny fanasana vilia? Amin'ity famerenana ity dia hilazako aminao ny momba ny tondra-dranon'ny Eve Water Guard izay hiaro ny tranonao amin'ny fahasimbana mety hitranga. Eve Water Guard dia sensor iray hafa amin'ity ...
Eve Thermo Connected 3 - famerenana ny lohan'ny HomeKit
2 Janoary 2021
Eva, eve thermo, loha, homekit
Ny fanaraha-maso ny fanafanana dia iray amin'ireo singa fototra izay manomboka ny dia amin'ny trano mahira-tsaina. Ny loha marani-tsaina dia efa miseho amin'ny trano mihabetsaka ary mendrika ny famerenana ireo kinova manaraka azy ireo. Androany dia manamarina ...
Eva ho an'i Homekit miaraka amina tab vaovao! Zahao ny tamba-jotra misy ny kofehy!
30 Desambra 2020
Eva, homekit, HomePod Mini, tari-dresaka, tambajotra kofehy
Eve for HomeKit dia rindrambaiko tsara ho an'ny HomeKit izay tsy mifantoka amin'ny vokatra mpamokatra iray fotsiny. Nahazo fanavaozana vaovao mahaliana ilay rindranasa izay hahafahantsika manamarina ireo fitaovana mifanaraka amin'ny Thread Network ananantsika! Ny kinova vaovao ...